Ama-micropoetry Archives - Mytika Speak
Ikhaya / micropoetry
Umaki - micropoetry
Ukubona lapho ukuthi amandla agxilwe yiqiniso langempela. - Khuluma
Njengengane encane Wazizwa efisa ukufuna ukuphatha umhlaba Wabe eseshintsha Lapho ededela umhlaba Wazizwa enokuthula Njengendoda endala Njengendala ...
Imibono eyingqayizivele Izindaba ezakhiwe yimizwa Izibuko zihlangene
Ukuxhumeka kuyadingeka.Swim ngokwakho ukwazi.Thola i-True Self
Ukwakha umbonoUkubalekela okungokoqoboUkuphila iphupho
Ngaphambi kwamehlo wonke, kuphila umbono weqiniso, ukulalela kuyisihluthulelo.
Kungenzeka kanjani ukuthi ukwazi amandla kube ngokweqile?
Kungani ipolitiki ingithukuthelisa kangaka?
Kuyini ibhalansi yamandla?